दयाहाङ र उपासनाको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ हिट होला ? « Khabarhub
दयाहाङ र उपासनाको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ हिट होला ?
तस्वीर – आर्यन बिमली
काठमाडौं – आउँदो भदौ १३ गतेदेखि चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा आउने चर्चा छ । निर्माण टिमले यही मितिमा फिल्म रिलिज गरिने संकेत गरेको छ । वर्षकै प्रतीक्षित यो फिल्मको टिजर केही हप्ताअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
टिजरले दर्शकबाट राम्रो साथ पाएको छ । फिल्ममा दयाहाङ राई र उपासना सिंह ठकुरी मुख्य आर्कषकका रुपमा छन् । यसअघि रिलिज भएका ‘कबड्डी’ र ‘कबड्डी कबड्डी’ ले दर्शकको राम्रो साथ पाएका छन् । कमेडी जानरामा निर्माण हुने यो सिरिजमा शीर्ष अभिनेता दयाहाङ राईलाई कुनै युवतीको प्रेम पाउन गर्ने सङ्घर्षका रुपमा देखाइने गरिन्छ ।
टिजर हेर्दा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा पनि दयाहाङ राईलाई उस्तै ‘प्रेमी’का रुपमा देखाइएको छ । नेपालमा बन्ने सिक्वेल फिल्मका हिसाबले सफल मानिएको यो फिल्मले दर्शकलाई कसरी तानेर राख्नेछ, त्यसका लागि केही समय लाग्नेछ । तर, यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो प्रतिक्रिया पाउने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसो त यो मितिमा पुष्प खड्का र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित फिल्म ‘मारुनी’ पनि प्रदर्शनमा आउने भनिएको छ । लभ स्टोरी मन पराउने दर्शकले यो फिल्म मन पराउने धेरैको अनुमान छ । तर, सोही मितिमा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ पनि रिलिज हुने भएपछि दर्शक दुईतिर बाँडिने पक्का छ ।
यतिबेला धमाधम फिल्मकै काममा व्यस्त रहेको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिमले कस्तो ट्रेलर सार्वजनिक गर्छ, त्यसका आधारमा पनि दर्शकको ध्यान खिच्नेछ । फिल्ममा कर्मा, रिश्मा गुरुङ लगायत अघिल्लो सिक्वेलका केही कलाकारले पनि अभिनय गर्नेछन् ।
अहिले भने रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ ले दर्शकको मन जित्ने धेरैको अनुमान छ । अब फिल्म कस्तो बनेर आउने हो, त्यसका लागि भने केही समय पक्कै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७६, बुधबार १२ : ४३ बजे